यौनकर्मी महिलालाई बेश्या को नाम दिइन्छ, यौनकर्मी पुरुषलाई के नाम दिने ? – Dainiki Sarokar
यौनकर्मी महिलालाई बेश्या को नाम दिइन्छ, यौनकर्मी पुरुषलाई के नाम दिने ?
२०७७ फाल्गुन १९, बुधबार १९:५२
बिहानीको झल्के घामसँगै उठ्ने बित्तिकै मेरो कानमा कसैको आवाज आएर ठोक्कियो । “हेल्लो बहिनी आरामै हुनुहुन्छ?” यो आवाज सुनियो ।
आज सम्म नसुनेको आवाज र कतै नदेखेको अनुहार थियो त्यो । थोरै झस्किए पनि अनि भने । “अँ आराम छु .तर तपाइलाई चिनिन नि दिदि”। ,
उमेर अलि पाकै थियो मेरो भन्दा ,दिदि साइनो लगाए ताकि कुरा गर्न असजिलो नहोस् भनेर ।
एकछिन चुपचाप उभिरहेपछी कुरा आफैले सुरु गरे । दिदि को हो तपाई चिनिन त,केहि भन्न आउनुभको जस्तो छ ,के छ भन्नु न । सायद मेरो यहि बोलीको पर्खाइमा थिइन् ती दिदि । हतार -हतार गरेर बोल्न थालिन , “बहिनि तपाईसंग एउटा कुरा गर्नु छ, तर यहाँ हैन भित्र गएर ।” नचिनेको मान्छेलाई रुम भित्र छिराउन मन थिएन मलाई ,तर उनमा मैले केहि गम्भीरता र केहि भन्न खोजेझै देखेर हुन्छ भनेर भित्रै बोलाए ।
ऊनले सोधिन् ” तपाई पत्रकार हो ? “
म झस्किए ,मैले आज सम्म पत्रकारिता गर्छु भनेर कसैलाई भनेकै थिएन ।
मैले सोधे “कसले भनेको दिदि ?”
ऊनले भनिन्, “तपाइको घरबेटीले भनेको ।”
कोठामा बस्नु भन्दा पहिले भनको थिए म यो काम गर्छु भनेर । अब ढाट्ने कुरा भएन ,
फेेेेरि मैले भने, हो तर किन ?
ऊनले भनिन्, तपाईंले मलाई दिदि भने पनि तपाई मेरो छोरीको उमेरको हुनुहुन्छ ,एउटा कुरा भनौ भनेर आएको अप्ठ्यारो नमानी सुनिदिनु है ,
नाइँ भन्न सकिन, मैले अनि हुन्छ भन्नु न , भने।
यति भन्न साथ दिदि बोल्न थालिन |
बहिनि, यो समाजमा यौनकर्मी पुरुष हुन्छ कि हुदैन ?
दिदीको यो प्रश्नको चित्त बुझ्दो उत्तर दिन हैसियत म सँग थिएन । खै दिदि थाहा छैन तर यो कुरा मसँग किन गरिरहनुभाको छ तपाइले मैले बुझ्न सकिन । मैले यति मात्र बोले ,दिदीले आफ्नै कुरालाई निरन्तरता दिन थालिन ।
म एउटी महिला हुँ । श्रीमान बाहिर हुनुहुन्छ । आज सम्म मैले यो समाजमा यौनकर्मी महिलाको धज्जी उडाएको सुनेको छु तर यौनकर्मी पुरुषको धज्जी उडाएको कतै सुनेको छैन । मैले बुझे अनुसार यौनकर्मी महिला भन्दा पुरुषको संख्या यो समाजमा धेरै छ । तपाइलाई कसरि थाहा भयो मैले सोधे ।म त्यस्ता धेरै पुरुष यौनकर्मिको सम्पर्कमा छु ।
आज सम्म मैले कति जना पुरुषलाई प्रयोग गरे मलाई थाहा छैन , तर जति जनालाई प्रयोग गरे सित्तैमा गरेको छैन ,सबलाई पैसा दिएको छु मैले । यौन व्यवसाय गरेर आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी पाल्ने धेरै पुरुषहरु छन यहाँ ।त्यस्ता पुरुष ठमेल र रत्नपार्कमा भेटिदैनन होला तर गन्ति गरेर आकडा निकाल्ने हो भने महिला भन्दा पुरुष यौनकर्मी धेरै छन ।
म मात्र त्यस्तो एक मात्र महिला हैन जसले पुरुषलाई प्रयोग गरेको ,म उदाहरण मात्र हो ,म जस्ता धेरै छन यो समाजमा,महिला मात्र पुरुषले प्रयोग गर्छ भन्ने हैन ,पुरुष पनि महिला बाट प्रयोग भैरहेका छन ।
दिदि यो सब कुरा मलाई सुनाउनुको कारण के हो त ?
यो समाजमा महिलाले अलिकति सस्कार मिच्यो भने ,परपुरुषको संगत गर्यो भने ,त्यसलाई यो समाजले दिने छुट्टै नाम छ । तर यहाँ त्यस्ता पुरुष पनि छन ,जसलाई महिलालेनै आफ्नो अधिनमा राखेर प्रयोग गरेका छन ,त्यस्ता पुरुषलाई यो समाजले दिने नाम के हो ?
दिदि यो समाजमा पुरुष यौनकर्मी छन भन्ने कुराको प्रमाण के छ त ?
म जस्ता धेरै महिला छन बहिनि यहाँ जसले पुरुषलाइ यौन साधनको रुपमा प्रयोग गरेका छन । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्न गार्हो हुन्छ तर बास्तबिकता यहि हो ,महिला यौनकर्मी हुन्छन भने त्यसकै तुलनामा पुरुष पनि हुन्छन | महिलालाई बेश्या उपनाम दिने यो समाजले ,सोझा महिलालाई बेश्या बनाउने पुरुषलाई किन केहि नाम दिन सक्दैन ? के महिला आफु एक्लैले यो सब गर्न सक्छे ?
म बाट के आशा गरेर यो सब भनिरहनु भएको छ त ?
कुनै आसा छैन मेरो | महिलाको मात्र प्रचार गर्ने यो समाजले पुरुषले गरेको कामको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्छ ।महिलालाई बेश्याबृति गरेको आरोपमा यो समाजले मात्र हैन मिडियाले पनि खुलेर बिरोध गर्दछ ,तर पुरुषले गरेको काममा किन मौन छ त ? यस्ता कुरा मिडिया बाट पनि आउनुपर्छ ,र सबैले थाहा पाउनुपर्छ ,यो समाजमा महिला मात्र हैन पुरुष पनि यौनकर्म गरेर आफ्नो जिबिका चलाइरहेका छन ।
कस्ता खालका पुरुषहरु यो कार्यमा संलग्न छन ,थाहा छ तपाइलाई ?
जस्तो अवस्थामा महिला यो दुनियामा प्रवेश गर्छन त्यस्तै हालतमा पुरुष पनि यो दुनियामा आउछन ।धेरै जसो बाध्यता र केहि आत्मसन्तुष्टिका लागि । यौन व्यवसाय गरेर घर परिवार चलाउने पुरुषको संख्याको कमि छैन । हेर्दाखेरि हाइ प्रोफाइलका जस्ता देखिने मानिसहरु पनि यो व्यवसायमा छन । म अहिले ४० बर्षको भए ,बिगत १० वर्षा दखि मैले यो देख्दै आइरहेको छु । बेरोजगारी युबाहरु यो क्षेत्रमा नराम्रो सग फसेका छन । जसलाई अब उत्रिन गार्हो हुने अवस्था छ । यदि तपाई चाहहुनुछ भने म त्यस्ता धेरै पुरुष हरुलाई भेटाइदिन सक्छु ,जसको आयस्रोत मात्र यौन व्यवसाय छ ।
कस्ता ठाउमा भेटिन्छन त यस्ता पुरुषहरु ?
महिलालाई जस्तो यिनीहरुलाई सबैले सार्बजनिक रुपमा यहाँ छन र त्यहाँ छन भनेर कसैले भनेका छैनन् । तर पुरुष यौनकर्मीको संजाल महिलाको भन्दा कम छैन । बिशेष गरि यिनीहरु बिदेशी ग्राहकको पिछा गर्छन । नेपाल घुम्न आउने बिदेसी महिला पर्यटक नै यिनीहरुको आम्दानीको स्रोत हो । नेपाली महिला हरुभन्दा विदशी महिला खोज्छन यिनीहरु तुलना गर्ने हो भने महिला र पुरुष यौन व्यवसायबाट संकलन हुने रकम बराबर नै हुन्छ होला ।
दिदि तपाई यौनकर्मी महिला होकी हैन त ?
म यौनकर्मी महिला हैन,मैले अरुलाई प्रयोग गरेको हो ,मलाई अरुले हैन ,यदि यौनकर्मी महिलालाई प्रयोग गर्ने पुरुषलाइ पनि यो समाजले यौनकर्मी पुरुषको नाम दिन्छ भन म यौनकर्मी महिला हो भन्न पछि पर्दिन । महिलालाई प्रयोग गर्ने पुरुषलाइ यो समाजले सधै माफी दिन्छ भने म पनि पुरुष प्रयोग गर्ने महिला हो ,मलाई नि यो समाजले माफी दिनुपर्छ ।
तपाइलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो त ?
यौनकर्मी महिलालाई जसरि यो समाजले बेश्याको उपनाम दिएको छ त्यसैगरी यौनकर्मी पुरुषलाई पनि यो समाजले दिने उपनाम खोजेको हो ? यौनकर्मी महिलालाई बेश्या भन्ने यो समाजले यौनकर्मी पुरुषलाई कुन उपनाम दिन सक्छ ?
म थोरै बोले ति दिदि धेरै बोल्न थालिन ,मलाई यो बिषयमा आफुले केहि गर्न सक्छु जस्तो लागेको थिएन ,तर कता -कता यो कुरा मनमा रहिरह्यो ,बास्तबमा त्यो दिदीको कुरा सहि थियो । यो समाजले यौनकर्मी पुरुषलाई दिने उपनाम के हो त ? महिलाका जस्तै बाध्यता र बिबसता हुन्छ पुरुषको पनि ,कोहि पनि मान्छे यौनकर्मी बन्न चाहदैन तर बाध्यता र बिबसताले मान्छेलाई त्यो ठाउमा होमिन बाध्य पार्छ ।
महिलाहरुले किन प्रयोग गर्छन त पर-पुरुष भन्ने कुरा पनि एकातिर छ । जसरि पुरुषले महिला प्रयोग गर्छ ,त्यसैगरी महिलाले पुरुष पर्योग गर्नु नौलो हैन तर यस्ता कुराहरु हाम्रो समाजमा गौण रहन्छ । लोग्ने साथमा नभएका महिलाहरु आफुले पुरुषलाई प्रयोग पनि गर्छन भने पुरुष बाट प्रयोग भइएका पनि छन ।
तर जति महिला माथि आरोप र सामाजिक लान्छना लगाइन्छ त्यति पुरुषलाई लगाइदैन ।आखिर पुरुष पनि त यौन व्यवसाय गर्छन भने महिलालाइ मात्र यी सब दोष लाउनु उचित हुदैन ।
ति दिदीको अनुहारमा यस्तै भाव थियो । मैले धेरै कुरा सोध्न चेस्टानै गरिन ।जति उनीसग म आत्मिय हुन थाले त्यति नै उनले मसंग यो बिषयमा सत्य कुरा बाहिर ल्याओस भनेर धेरै आस गर्छिन भन्ने मलाई थाहा थियो ,जसको लागि मसंग अहिले कुनै क्षमता छ जस्तोनि लागेन । तर अन्त्यमा एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो ।
दिदि ति पुरुषहरुले पनि तपाईसंग सम्झौतामा काम गर्छन हो ?
उनीहरुको पेसानै यहि भयपछी बिना पैसामा काम गर्दैन ।मैले बुझे अनुसार उनीहरुले ५-१५ हजार सम्म लिन्छन । बिदेशी संग त अझ धेरै लिन्छन भन्न सुनेकी छु । सुरुमा बाध्यतामा यो क्षेत्रमा आएका उनीहरु यसरि फस्छन कि चाहेर पनि उम्कन सक्दैनन् ।
अहिले पनि तपाई यौनकर्मी पुरुष संग नजिक हुनुहुन्छ ?
नजिक छु ,तर अब म यो ठाउबाट पर पुगिसके । सुरुमा साथीको संगतले यो ठाउमा आए । पुरुषलाई आफुले प्रयोग गर्न पाउदा गर्व पनि थियो । मैले जितेको महशुश गर्न थालको थिए । पछि थाहा भयो म गलत गर्दै रहेछु भनेर ।अहिले म यो ठाउमा छैन तर आफुले गरेको काम भुल्न सक्ने पनि हैन । त्यस्ता धेरै पुरुष सग अहिले पनि सम्पर्कमा छु तर प्रयोग गर्ने कुरा बाट अलि टाढा छु ।
मैले केहि समय पहिला पनि यौनकर्मी पुरुषको बारेमा एउटा लेख पढेको थिए । नाम ठ्याकै याद भएन । तर उस्को कथा र व्यथा रोचक र घोचक थियो । रहरले कोहि पनि यो ठाउमा आउदैन । परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता र बेरोजगारीको कारण नचाहेर पनि महिला अथवा पुरुष यो पेशा अंगाल्न पुग्छन । तर पुरुषले भन्दा महिलाले बढी लंछित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हाम्रो नेपालमा देह व्यापारलाई मान्यता दिएको छैन तर यसको छुट्टै संजाल छ नेपालमा गौण रुपमा । समाचारमा सुनिए अनुसार मसाज सेन्टर नै यसको अखडा हो । बेला बेलामा यसको बारेमा चर्चा सुनिए पनि पछि आफै सेलाएर जान्छ । नेपालमा पनि यौन व्यवसायमा मान्यता दिने ,निश्चित क्षेत्र तोकेर ,त्यो क्षेत्रमा मात्र त्यस्तो गतिबिधि गर्न पाइने भन्ने कुरा पनि थियो तर त्यो कुराको पनि बिरोध भैरहेको छ ।
यौन ब्यबसयालाई कानुनी मान्यता दिने कुरालाई नेपालमा लागु गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । परम्परागत धार्मिक मूल्य र मान्यता बोकेको ,र आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको मुलुकमा त्यस्ता कामले कानुनी मान्यता त पाउन सक्दैन । तर यौनकर्मी महिला पुरुषलाई कानुनले सजाय दिएको पनि त्यति सुन्न पाइदैन ।
तर जे होस् यो समाजमा महिला मात्र हैन त्यसकै हाराहारीमा पुरुष यौनकर्मी पनि छन भन्ने कुरालाई भने हामीले जानकारीको रुपमा राख्दा हुनेछ। चकले भनेजस्तै समाजमा पुरुष पनि यौन व्यवसायमा संलग्न छन भने उनीहरुलाई पनि यो समाजले एउटा उपनाम त दिनैपर्छ ? जसरी यौनकर्मी महिलालाई बेश्याको उपनाम दिईएको छ ।
को को हुन् खुलेरै लागेका दाहाल–नेपाल समूहमा ९२ जना सांसद (सूचिसहित)